आज २०७८ साउन ५ गते मंगलबारको राशिफल, यस्तो छ तपाईको भाग्यफल — Sanchar Kendra
आज २०७८ साउन ५ गते मंगलबारको राशिफल, यस्तो छ तपाईको भाग्यफल
आज २०७८ साउन ५ गते मंगलबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिषी एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ-
प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसित भेटघाट हुने तथा सल्लाह र सद्भाव प्राप्त हुने सम्भावना छ । धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वको क्षेत्रमा भ्रमण हुनेछ ।
आज रोकिएको अधुरो कार्यले पूर्णता पाउनेछ । धनार्जनका नयाँ स्रोतहरू पत्ता लाग्नेछन् । प्रेमीको सहयोग प्राप्त हुनेछ । छोटो यात्रा पनि होला ।
नयाँ अवसर आउन सक्नेछन् । रमणीय यात्राको योग छ । धनार्जनका नयाँ स्रोत पत्ता लाग्नेछ । प्रणय सम्बन्ध श्रेष्ठकर हुने योग छ ।
शुभ समाचार सुन्न पाइएला । कला र गलाको प्रभाव बढ्नेछ । मनमा हर्ष,उमङ्ग र उत्साह छाउला । सन्तान सुखको योग छ। अधुरा कार्यहरू पूरा हुँदै जानेछन् ।
आज मन खिन्न हुने स्थिति आउनेछ । कार्य सम्पादनमा सहजता नमिल्ला । जिद्दीपनाले गर्दा काम बिग्रने डर छ । व्यवसायिक स्थितिमा गिरावट आउनसक्छ ।
कुन राशिका लागि शुभ, कुनका लागि अशुभ ? यस्ताे छ आजको राशिफल
आज २०७८ साउन ८ गते शुक्रबारको राशिफल
आज २०७८ असार २१ गते सोमबारको राशिफल
आज २०७८ असार २० गते आइतबारको राशिफल, यस्तो छ तपाइको भाग्यफल
यो शनिबार कुन राशिका लागि छ फलदायी ? हेर्नुहोस तपाईको आजको राशिफल
आज २०७८ असार १४ गते सोमबारको राशिफल, कस्तो छ तपाइको भाग्यफल ?